संवैधानिक प्रक्रियाबाट बजेट आउछ : नारायण खड्का, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य
फर्जी विद्यार्थी विरुद्ध अनशन
पछिल्लो समयमा बजेट ल्याउने विषयमा दलहरुबीच सर्वदलीय बैठक भएको छ । एमाओवादीले सकेसम्म पूर्ण बजेट नै ल्याउने दाउमा छ । के पूर्ण बजेट आउछ ? या कस्तो बजेट आउछ भन्ने विषयमा केन्दि्रत रहेर नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा नारायण खड्कासँग ओएनएसका लागि लोकेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप : पछिल्लो समयमा बजेट ल्याउने विषयमा दलहरुबीच सर्वदलीय बैठक भएको छ । एमाओवादीले सकेसम्म पूर्ण बजेट नै ल्याउने दाउमा छ । के पूर्ण बजेट आउछ ? या कस्तो बजेट आउछ भन्ने विषयमा केन्दि्रत रहेर नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा नारायण खड्कासँग ओएनएसका लागि लोकेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
समय भैसक्यो बजेट आउछ होला ?
संविधान सम्मत बजेट आउछ । सहमतीय सरकार नबनेको अवस्थामा बजेट नै नल्याउनु हुन्न भनेको होइन । काम चलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले कानुन सम्मत बजेट ल्याउने मात्रै भनेको हो ।
पूर्ण या आंशिक कस्तो बजेट आउछ ?
अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री नेपाली सेनालाई पनि बजेट दिनु पर्ने भयो । बजेट बढाएर ल्याउनु पर्‍यो । र पूर्ण बजेट कै कल्पना गरेका छन् । मंगलबारको सहमति विपरीत फेरि एमाओवादीले कुरा गरेको छ । एक तिहान नै आउनु पर्छ ।
तपाईहरुलाई आपत्ति किन हो ?
संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै बजेट आउनु पर्छ भन्ने हो । नियम कानुन अनुसार भन्दा विपरीत वा नियम मिचेर बजेट ल्याउनु हुन्न ।
सहमति के भएको छ ?
संविधान अनुसार नै बजेट ल्याउने सहमति भएको हो । तर उनीहरुले सेना र चुनावलाई पनि बजेट चाँहिन्छ भन्दै बजेट बढाएर ल्याउने प्रयासमा छन् ।
पूर्ण हिसावको छेउछाउमै पुगेर बजेट ल्याउन चाहेका छन । माओवादीले आफ्नो योजना र आफूले ल्याएका कार्यक्रम बजेटमा घुसाउने जुक्तीमा छ ।
तपाईको नजरमा कस्तो बजेट आउछ ?
मैले बुझे अनुसार पूर्ण बजेट ल्याउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री र माओवादी छ ।
'प्रहरी पनि देखिए, होसहवास गुमाएका'
.......त्यसपछि किताबमा पटक्कै ध्यान गएन । दाइभाउजूको कोठातिर कान थापेँ । केही सुनिएन । सबैतिर सामसुम्म छ । मुटु ढुकढुक गर्न थाल्यो । उठेँ । किताब त्यत्तिकै तकियामाथि राखेँ । खाटमा टुक्रुक्क बसेँ । को होला बाहिर ? यो कफ्र्यूमा को हिँडिरहेको होला ? भर्खरै त्यहाँबाट आएको ! केही थिएन ! गस्तीमा हिँडेका प्रहरी हुन् कि ? कतै माओवादीहरू त आएनन् ? यस..	विस्तृतमा
अपडेट : दार्चुला बस दुर्घटनामा मर्नेको संख्या ८ पुग्यो
दार्चुला, ९ जेठ (ओएनएस) : दार्चुलाको गोकुलेश्वर ६ ठुलीशैनमा विहान भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या ८ पुगेको छ भने ३५ जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा बसका मालिक महेन्द्रनगरका कृष्ण भट्ट, बस चालक करनसिंह साउद , दार्चुला खरकडा गाविस वडानम्वर ९ का मोतीराम भट्ट, शर्मालीका गोपालसिंह बोहरा रहेका छन । ..	विस्तृतमा
राजविराज, ९ जेठ (ओएनएस): जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह बस्नेतले प्रहरी विघटित संविधानसभाका पूर्व सभासद् सदरुल मियाँ हकको हत्याराको नजिक पुगेको दाबी गरेका छन् । उनले अनुसन्धानको क्रममा रहेको प्रहरी हत्याराको नजिक पुगिसेको बताए ।
हालसम्म कसैलाई नियन्त्रणमा नलिए पनि महत्वपूर्र्ण सुराक हात पारेको..विस्तृतमा
काठमाडौं, जेठ ९ (ओएनएस) : राजस्थान रोयल्स भारतमा जारी आइपीएल क्रिकेटको क्लाविफाइङ्ग राउण्डमा प्रवेश गरेको छ । बुधबार राती भएको खेलमा सनराइजर्स हैदरावादलाई ४ विकेटले हराउँदै राजस्थान क्लालिफाइङ्ग राउण्डमा प्रवेश गरेको हो । राजस्थानको जितको लागि म्यान अफ द म्याच ब्रेड हजले अर्धसतकीय योगदान गरे । ब्रेडले २९ बल खेल्दै ५ छक्का र २ चौक..विस्तृतमा